“खेताला लोग्ने ” « Etajakhabar
कुमारले कृष्णलाई आफनो गाउँ घुम्ने निम्तो दियो। समय मिलाएर फेरि भेट्ने बाचा गर्दै उनीहरु छुट्टिए। पारिवारिक तनावले गलेका कुमारको अनुहारमा अनायासै खुसीका रंग पोतिएको देखेर उसका छोराहरू कुशल र कुवेर पनि खुसी भए। सौतेनी आमाको कचकचले पिरोलेका उनीहरुका अनुहारमा छाएको मुस्कानले केही हदसम्म शीतलता प्रदान गर्यो। एक दिन आत्मीय मित्र कुमारको गाउँ जान भनेर कृष्ण निस्कियो। साथीको स्वागतमा कुमारले गच्छेअनुसार मीठोमसिनो जोहो गरेको थियो। सुरूमा उसले परिवारका सदस्यहरुसँग परिचय गरायो। श्रीमती जानु, छोराहरु कुशल र कुवेरसँग।
हैसीयतले भ्याएसम्म उपचार गर्दा पनि रहर चुँडिदा विचलित थिइन् उनी। र, कलह मच्चाउन थालिन् सानो परिवारमा। उनको कलहबाट मुक्त हुन कुमारले अनेकौँ उपाय रच्न थाल्यो। अन्तमा कुमार बाल्यकालको मित्र कृष्णकोमा शरणार्थी झैं हात फैलाउन पुग्यो। शहरको शानदार महलमा शान्तसँग जीवन बिताइरहेको कृष्ण आफ्नो अगाडि कुमारलाई देखेर दंग पर्यो। ग्वाम्लाङ अँगालोमा बेर्यो। पहिले जस्तो कुमारको अनुहारमा खुसी नदेख्दा कृष्णको मन खिन्न भयो। ऊ सशंकित भयो, ‘कतै मैले जानु भाउजुको रूपलाई भित्रभित्रै मन पराएको कुरा कुमारले थाहा पायो कि!’ उदास कुमारका नयन नियाल्दै उसले सोध्यो, ‘कुमार, किन चिन्तित देख्छु नि, के भयो? मबाट केही सहयोग हुन सक्छ कि?’कुमारका आँखाबाट बररर आँशु बर्सन थाले। उसको मुखबाट फुत्त एउटा आवाज निस्कियो, ‘कृष्ण म साँच्चै सहयोग माग्न आएको हुँ, सहयोग गर्छस्?’ ‘दिल खोलेर सहयोग गर्नु त मित्रको कर्तव्य नै हो नि, नत्र केको मित्र भन्नु? के सहयोग गर्नुपर्यो मैले, भन् न कुमार’, कृष्णले सहानुभूति दियो।
( देबकी के सी को कथा “खेताला लोग्ने ” यो कथा दैनिक नेपाल न्युजमा रहेको छ हामीले साभार गरेका हौ)